Tombony ho an'ny orinasa - EMATE ELECTRONICS CO., LTD
Toetran'ny toetr'andro fototra
Tombontsoa lehibe ho an'ny orinasa
Ny orinasa dia manana tombony manokana amin'ny teknolojia fototra amin'ny teknolojia detection sensor momba ny tontolo iainana, famolavolana rindrambaiko tafiditra, teknolojia fampitana RF, Bluetooth, fikarohana sy fampandrosoana ny teknolojia fifandraisana WIFI Internet. Ankoatr'izay, ny orinasa dia mifandray amin'ny tsena eo aloha amin'ny alàlan'ny R&D sy ivom-pivarotana am-pitan-dranomasina, mitroka ny teknolojia fanapahana sy ny fitantanana famolavolana endrika, ary mamolavola vokatra mifanaraka amin'ny filan'ny tsena iraisam-pirenena ary manome azy ireo ho an'ny mpanjifa manerantany.
Ny ekipa mpivarotra an'ny orinasa dia manana traikefa manan-danja amin'ny varotra iraisam-pirenena. Ny vokatra dia niditra tao amin'ny fantsom-barotra mahazatra any Eropa sy Amerika. Miara-miasa amin'ireo marika matihanina malaza any Eropa sy Amerika izahay, toy ny marika iraisam-pirenena LEXON, OREGON, BRESSER, sns., Ary manana fiaraha-miasa akaiky amin'ny fivarotana lehibe toy ny: ALDI, LIDL, REWE, sns. Mandritra izany fotoana izany, ny orinasa dia nanangana ekipa varotra marika iraisam-pirenena ho valin'ny fiovana eo amin'ny tontolon'ny tsena, mamorona lamina fivarotana amin'ny varotra iraisam-pirenena OEM / ODM ary ny varotra marika iraisam-pirenena.
Ny orinasa dia manana fahaiza-mitantana fitantanana rojom-bolo matanjaka sy fampidirana mitsivalana ny fanamboarana, avy amin'ny famokarana bobongolo, famolahana tsindrona plastika, fanontana efijery spray, fanamafisam-peo elektronika, fifamatorana patch amin'ny fivorian'ny vokatra vita. Ny tahan'ny namboarin-tena dia nahatratra 70% mahery.
Nahazo ISO: 9001 fanamarinana rafitra kalitao sy fanamarinana andraikitra ara-tsosialy BSCI.
Ny vokatra isan-karazany an'ny orinasa dia voamarin'ny CE, RED / R & TTE, ROHS, REACH, GS, FCC, UL, ary ny fanamarinana fiarovana ETL izay tena henjana amin'ny fifehezana kalitao any Eropa sy Amerika.
Ekipa injeniera teknikan'ny orinasa dia nahazo patanty indostrialy an-jatony, patanty modely ho an'ny fampiasana, patanty famoronana teknolojia ary patanty momba ny zon'ny mpamorona lozisialy.
Paikadin'ny talenta an'ny orinasa
Amin'ny dingan'ny fametrahana sy ny fampandrosoana, ny orinasa dia manome lanja lehibe ny fampidirana sy ny fambolena talenta, ary mametraka rafitra fampandrosoana ho an'ny fantsona roa ho an'ny talenta matihanina sy ara-teknika ary ny talenta fitantanana sy ny asa. Amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia manana kalitao avo lenta sy avo lenta ary fitantanana matihanina efa za-draharaha, ary ekipa fikarohana sy fampandrosoana ho an'ny injeniera mahery vaika misy ny famolavolana rindrambaiko, famolavolana fitaovana elektronika, famolavolana injeniera miorina amin'ny endriny, famolavolana indostrialy.
Ao amin'ny Emate, izahay dia manolo-tena amin'ny fampandrosoana sy fanamboarana vokatra elektronika an-trano an-trano miaraka amin'ny herin'ny fanavaozana ara-teknolojia, ahafahan'ny olona mankafy fiainana tsara kokoa, mety kokoa ary mahira-tsaina. Ity ihany koa ny iraka noteren'ny orinasa hatramin'ny nanombohany.
Ny orinasa dia hanaraka ny filozofia filoham-pirenen'ny "fanavaozana sy ny fampandrosoana, ny fironana ho an'ny mpanjifa, ny hafainganam-pandeha sy ny fitiavana ary ny tsy fivadihana", miaraka amin'ny "fanavaozana ara-tsiansa sy ara-teknolojia" ho fifaninanana fototra, hahatonga an'i Emate Electronics Co., Ltd. ho tompon'andraikitra iraisam-pirenena orinasa indostrialy mifantoka amin'ny vokatra elektronika fiainana an-trano an-trano.
Tonga eto ny solstice fahavaratra
Torolàlana momba ny mari-pana fahandro farafahakeliny azo antoka